Izikolo ezili-10 eziPhezulu zezoBugcisa
Izikolo eziPhambili zeZikolo zeBakala
Ukuba unomdla ekufundeni ishishini, khangela ezi zikolo zoshishino eziphezulu kuqala. Ngamnye unesakhiwo esinomdla, ootitshala kunye nokuqatshelwa kwegama. Ndiye ndabhala izikolo ze-alfabhethi ukuphepha ukuhlukana okungaqhelekanga kusetyenziswa ukugqiba ukuba ngubani omele abe yinombolo ye-7 okanye ye-8 kwisihlomelo esiphezulu seshumi. Oko kwathiwa, iSikolo seWharton kwiYunivesithi yasePennsylvania ihlala ibonisa indawo ephezulu kwisikhundla sikazwelonke.
Nangona awukho i-100% eqinisekile ukuba ishishini lilungile kuwe, qaphela ukuba zonke ezi nkqubo zikhoyo kwiiyunivesithi ezinkulu apho unokutshintsha khona iindandatho ngokulula. Enyanisweni, ezinye zezi zikolo zifuna abafundi ukuba bathathe unyaka wobugcisa be-liberal kunye neesayensi ngaphambi kokuba bangeniswe kwinkqubo yezoshishino.
Ukuba ucinga ukuqhubela phambili kwi-MBA, uyazi nokuba i-degree ye-grade-grade ye-bhasti ayikho into ebalulekileyo. Ubunono bokucinga, ukubhala nokubhala izibalo kwintliziyo yemfundo ye-liberal inokukunceda ngokunjalo, ukuba kungengcono, kunokugqithiseleyo kunesidanga esincinci ngaphambili.
Igumbi lokuThengisa iBoas, iParker Centre yoPhando loTyalo-mali, uYohn School School (iSage Hall), iYunivesithi yaseConell. Wikimedia Commons
E- Ithaca, eNew York , kwiYunivesithi yaseConell ineendlela ezintle ezikhethileyo zezifundo ezithweswa ngabafundi abanomdla kwishishini kunye nokulawula, kwaye iyunivesiti ihlala iphakamileyo kwii-gradeings zeeprogram zezolimo. Abafundi bangakhetha kwiSikolo seDyson se-Applied Economics kunye noLawulo, iSikolo soLawulo lweehotele, kunye neSikolo soBuchule kunye noBudlelwane bezeMisebenzi. ISikolo seDyson sihlala kwiKholeji yezolimo kunye nezoBomi beSayensi. Bobabini iDyson kunye ne-ILR ziyinxenye yunithi yenkxaso-mali ka-Cornell, ngoko ke ukufundiswa kuya kuba ngaphantsi kweSikolo soLawulo lweehotele. Abafundi abanomdla kufuneka baqoke isikolo abasenzayo kwizicelo zabo. Ulawulo lweehotele ngokuqhelekileyo licingelwa ukuba liyona ndlela iphambili yelo hlobo kwilizwe. I-Cornell inxalenye ye- Ivy League , kwaye ihlala ihamba phakathi kweeyunivesithi eziphezulu kweli lizwe.
Funda ngakumbi: Iprofayile ye-Cornell
Ukwamkelwa: I- GPA, i-SAT kunye ne-ACT umzobo we-Cornell
Hlola i-Campus: I- Tourell Photo Tour yaseYunivesithi
IYunivesithi yaseEmory - iSikole seBhizinisi seGoizueta
School Goizueta. Wikimedia Commons
ISikolo seBusiness Goizueta sithatha igama layo kuRoberto Goizueta, owayengumongameli weCoca-Cola Inkampani. Esi sikolo sikwi-Emory yeyona nkampani enkulu kwi-Atlanta. Esi sikolo esiphakamileyo kakhulu sinikeza abafundi ithuba lokutshintshisa amathuba kwiCass School of Business eLondon. Ikharityhulam yeGoizueta ikwakha kwiminyaka emibili yobugcisa bobugcisa kunye nesiseko sezesayensi. Abafundi, bobabini badluliselwa kunye no-Emory, banokusebenza kuphela xa befumene ukuma okusemgangathweni. Ubuncinane bemilinganiselo yeB B + kwiikhosi zangaphambi kwezoshishino kuyadingeka ukuba kwamkelwe.
Funda ngakumbi: Iprofile ye-Emory
Ukwamkelwa: I- GPA, i-SAT kunye ne-ACT umdwebo we-Emory
I-Massachusetts Institute of Technology - iSoan School of Management
USobhala weeNkokheli zaseMelika uJohn Kerry uhambisa intetho kwi-Massachusetts Institute of Technology eSchool School of Management eCambridge, eMassachusetts. Ifoto yeSebe leSizwe / iWindows Domain
Isikolo soLawulo lweS Sloan, esiseMfuleni waseCharles eCambridge, sisoloko sifumana kwizintlu eziphezulu ezilishumi zezikolo zoshishino lwe-undergraduate. Isikolo seS sloan sinika i-bachelor's, i-master's and degrees degree degrees, kunye nabafundi abagqwesileyo bahlala befunda kunye nabafundi abaphumelele. Akukho nxaxheba eyahlukileyo yokwamkelwa kwabafundi beStan School-abafundi abaye bamkelwe kwi-MIT bamane nje bavakalise iSayensi yoLawulo njengeyona yabo enkulu ekupheleni konyaka omtsha. Ngomnyaka we-2008, iMIT yaqalisa intsha entsha kwi-Science Science. I-mathematically-challenging imele icinge kabini ngaphambi kokuqwalasela isiSloan-isikolo sinokugxininiswa ngokungaqhelekanga ekuhlalutyweni kwamanani.
Funda ngakumbi: I- IMIT profile
Ukungena: I- GPA, i-SAT kunye ne-ACT umdwebo we-MIT
IYunivesithi yaseNew York - iSock School of Business
Isikolo se-NYU Stern Business. pundit / Wikimedia Commons
Efumaneka kwiGreenwich Village eManhattan, kwiYunivesithi yaseNew York kaLeonard N. Stern School yezoShishino yinto ekhethekileyo kubafundi abanomdla abafuna iprogram ephezulu kwindawo esemadolophini. ISikole seShishini seShishini likhuphisana kakhulu kunye nezinga eliphantsi kakhulu lokumkela ukwedlula i-NYU ngokubanzi. Ngokungafani nezinye iiprogram zezoshishino zangaphambili, i-Stern School ngumgaqo-yekharityhulam weminyaka emine-abafundi kufuneka babonise umdla wabo kwishishini kwisicelo sabo sokuqala ku-NYU.
Funda ngakumbi: Iprofile ye-NYU
Ukungena: I- GPA, i-SAT kunye ne-ACT umzobo we-NYU
UC Berkeley - Isikolo seShishini seHaas
I-UC Berkeley School of Business. yanec / Flickr
ISikole sezoBhizinisi saseBerkeley sikaWalter A. Haas , njengezinye izikolo zikarhulumente eziluhlu, unikezela ngeprogram yecandelo leshishini eliphambili kwixabiso lexabiso. I-Haas inekharityhulam yeminyaka emibili, kwaye abafundi mabafake isicelo esikolweni ukusuka eBergkeley. Ngo-2011, malunga nesiqingatha sabantwana baseBerkeley abafaka izicelo kwi-Haas banikezelwa ukungena. Ngokomyinge, abafundi abawamkelekileyo babe neGrade-graduate GPA ye-3.69. Isikolo seHaas sisekhoneni laseBerkeley e Berkeley, eCalifornia.
Funda ngakumbi: Iprofayile yaseBerkeley
Ukwamkelwa: I- GPA, iSAT kunye ne-ACT graph eBerkeley
Hlola iCampus: uhambo lwe-UC Berkeley ifoto
IYunivesithi yaseMichigan - School of Ross School of Business
ISikole sikaStephen M. Ross weZakhiwo zoshishino, iYunivesithi yaseMichigan. Wikimedia Commons
ISikole sikaStephen M. Ross wezoBhishino kwiYunivesithi yaseMichigan uhlala kwisiqingatha esiphezulu seenkcukacha eziphezulu ezilishumi kwizikolo zezorhwebo zase-US. Impumelelo yesikolo iye yabangela ukwakha indlu entsha yeenyawo ezingama-270,000 zeRoss. Isikolo seRoss sinomsebenzi wekharityhulam weeminyaka emithathu, ngoko ke abafundi abaninzi basebenzayo ngonyaka wabo wokuqala eMichigan. Ngokomyinge, abafundi abawamkela ukuwa kwe-2011 babe ne-GPA ye-3.63. Abafundi bezikolo eziphakamileyo eziqhelekileyo bangafaka isicelo kwiHaas ngokusebenzisa "inkqubo yokungeniswa". Ukuba zamkelwe, aba bafundi baqinisekisiwe indawo kwiSikolo seRoss yezoRhwebo ukuba bafezekisa iimfuno ezithile ngexesha lonyaka wabo wokuqala weekholeji. Kuphela i-19% yabafakizicelo abamkelweyo abamkelekileyo bayamkelwe ukuwa kwe-2011.
Funda ngakumbi: Iprofayile yaseMichigan
Ukwamkelwa: I- GPA, i-SAT ne-ACT graph eMichigan
INC Chapel Hill - iSikole seShishini seKanan-Flagler
ISC School Hill iKanan-Flagler Business School. DP08 / Wikimedia Commons
ISikole seShishini se-Kenan-Flagler kwiYunivesithi yaseNorth Carolina sinomlinganiselo ophantsi wexabiso kuzo zonke izikolo eziluhlu. Ukususela ngo-1997 isikolo siphethe isakhiwo esinqabileyo seenyawo ezili-191,000 kwi-Campel Hill campus. Abafundi bafaka isicelo kwi-Kenan-Flagler emva komnyaka wabo wokuqala kwi-UNC Chapel Hill, kwaye ukudlulisela abafundi kufuneka bafake isicelo kwi-UNC yokuqala. Kwinqanaba le-2011, abafakizicelo abangama-330 bavunywa kwaye i-236 yavunywa. I-GPA ephakathi kwabafundi abavunyelwe yi-3.56.
Funda ngakumbi: Iprofayili ye-UNC Chapel Hill
Ukwamkelwa: I- GPA, iSAT kunye ne-ACT graph kwi-UNC Chapel Hill
Hlola iCampus: iNtambo ye-UNC ye-UNC Chapel
IYunivesithi yasePennsylvania yaseWharton School
IYunivesithi yasePennsylvania yaseWharton School. UJack Duval / Flickr
ISikolo seWharton kwiYunivesithi yasePennsylvania isoloko ihamba njengesikolo esiphambili esikolweni kwisikolo, ukuba kungekhona ihlabathi. I-website yesikolo ithi i-faculty yinkampani yezobugcisa ezipapashiweyo kwaye zikhankanywe kwihlabathi, kwaye i-Wharton inomyinge obalaseleyo we-8 ukuya ku-1 womfundi / ubuchule bobuchule . Iprogram yokufunda i-graduate ifumana izicelo ezingama-5 500 ngonyaka apho malunga ne-650 zivunyiwe. Isikolo yiprogram yeminyaka emine, ngoko abafundi bafaka isicelo ngokuthe ngqo kwisikolo esiphakamileyo. Imivuzo yokuqala yaseMedian i-Wharton iziqu ezisezantsi ziphela kwisikolo se-MIT's Sloan.
Funda ngakumbi: Iprofayile ye-Penn
Ukungena: I- GPA, i-SAT kunye ne-ACT umzobo we-Penn
IYunivesithi yaseTexas e-Austin-McCombs School of Business
I-Red McCombs yeShishini. Wikimedia Commons
UMcCombs ungomnye wesikolo sezobugcisa obuhle kakhulu kwiyunivesithi yaseburhulumenteni, kunye neprogram yesikolo esiphantsi kwayo ihlala ifumana amanqaku aphakamileyo kwizinga lelizwe. Ingxelo ebalulekileyo yomelele ngakumbi. Uninzi lwabafundi baseMcCombs basebenza ngokuthe ngqo ukusuka esikolweni esiphakeme, kwaye imigangatho yokumkelwa iphezulu kune UT. Austin ngokubanzi. Ukuze iklasi ingene ngo-2011, abafake izicelo bezi-6 157 basebenze kwaye ba-1,436 kuphela bavunyelwe. Abafundi banokudluliselwa kwiMcCombs ukusuka kwelinye iikholeji ku-UT Austin, kodwa ukungena kwiingcipheko kungaphantsi. Kwakhona, ngenxa yokuba isikolo sixhaswa ngurhulumente, ezininzi izithuba zigcinwa kubahlali baseTexas. Ibha ye-admissions yile ndlela iphakame ngakumbi kubafakizicelo belizwe.
Funda ngakumbi: Iprofayile yeT UT Austin
Ukungena: I- GPA, i-SAT kunye ne-ACT umzobo we-UT Austin
IYunivesithi yaseVirginia - iSikolo seMicrosoft yaseMelika
I-Lawn yaseYunivesithi yaseVirginia, eU.SA, ikhangele ngaseningizimu kwiHolo ye-Old Cabell. Wikimedia Commons
Ngo-2011, iiveki lezeShishini li-McIntire # 2 phakathi kwezikolo zoshishino lwe-undergraduate, kwaye i-state state education is 1/4 iindleko zeeyunivesithi ezizimeleyo. Isikolo esandula kutshintshwa kwi-Rouss Hall kwisikhundla se-UVA esihle saseCharlottesville eJeffersonian Virginia. Isikolo sekharityhulam se-McIntire sidinga iminyaka emibini, ngoko abafundi basebenza ngokusentwasahlobo kunyaka wabo wesibini kwiYunivesithi yaseVirginia. Udidi lokungena ngo-2011 luneGG enentsingiselo ye-3.62, kwaye i-67% yabenzi bezicelo zamkelwa. UMcIntire uyamkela kwakhona abafundi bokudlulisa ngaphandle kwe-UVA ukuba ngaba benomsebenzi weklasi kunye neziqinisekiso.
Funda ngakumbi: Iprofayili ye-UVA
Ukwamkelwa: I- GPA, iSAT kunye ne-ACT igrafu ye-UVA
Hlola iCampus: IYunivesithi yaseVirginia yeThoto Photo
Bala Amathuba Akho Okungena
Qaphela ukuba unamabanga kunye neemvavanyo zokuvavanya kufuneka ufike kwenye yezi zikolo zoshishino eziphezulu kunye nesixhobo samahhala esivela kwiCappex: Bala amaxesha akho wokufumana
20 Iikholeji ezinkulu kubafundi abanezikolo eziphantsi kweSAT izikolo
Indlela Yokuqalisa Indlela yokuDala iMidlalo yeeNqununu
Amahlaya ama-Art: Ufanele ube ngumculi Ukuba ...
Iimpawu ezi-10 eziphezulu zeSikolo soMgangatho
Indlela Yokuphendula Umbuzo "Ndixelele Ngomngeni Owunqobileyo"
Ukubhenela KwiNkohlakalo Ubuxoki
I-Ice Ice Crystal Ball Bubble
Ukuhlanganiswa / ukuxhamla u-Fallacy - Ukuchaza into eyenzekayo kwiindawo zokuthabatha
Ukwakhiwa kwezakhiwo zomzimba Izenzo zoMsundu wokuSebenza Ukwahlula
I-Glossary yesiJamani-IsiNgesi yeeNgqamlezo eziqhelekileyo zesiJamani
Imibono yamaSilamsi ngokuphathelene neenja
Isiqhelo - Ukuphela, Ukuphelisa
UDaniel Harold Rolling, uGainesville Ripper
Indlela yokusebenza kunye noMama kaMariya neengelosi zokuPhilisa ubudlelwane
Ukuthintela - (ukukhubaza)
Inzululwazi ye-Kid: Indlela yokwenza i-Balance Scale Scale
IsiSanskrit, uLwimi oluNgcwele lwaseIndiya
Ngaba Ama-atheist Believe in Ghosts?
I-Romanticism - I-History History ye-101
Imfazwe ka-1812: uCaptain Thomas MacDonough